काठमाडौंमा प्रयोग गरिने धेरै मास्कले धुलो छेक्न सक्दैनन्, किन ? - ज्ञानविज्ञान
काठमाडौं उपत्यकामा धुँवा र धुलोका कारण आम नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र होइन देशका मुख्य सहरको हावा स्वास्थ्यका लागि अनुकूल छैन् । त्यसैले धेरै नागरिकले मास्कको प्रयोग गरिरहेका अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर एक अध्ययनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा जम्मा ३० प्रतिशत नागरिकले मात्र मास्कको प्रयोग गरेको पाइएको छ ।
प्रयोगमा रहेका मास्कले साँच्चिकै धुलोरधुँवा छेकेको छ त रु त्यसको जानकारीका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा।भानु न्यौपाने, काठमाडौं व्यवहारिक विज्ञान प्रतिष्ठानका वैज्ञानिक डा।बसन्त गिरी, अमिता शर्मा , संगीता मैनालीले एक अध्ययन गरेका छन् । अध्ययनको निष्कर्ष प्रतिष्ठित जर्नल पीएरले सार्वजनिक गरेको छ ।
कति मान्छेले प्रयोग गर्छन् मास्क
काठमाडौंका धेरै गाडी गुड्ने प्रमुख स्थानमध्ये एक कलंकीमा सन् २०१६ मा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार यो क्षेत्र भएर हिड्ने मान्छेमध्ये ३१ प्रतिशतले मास्क लगाउने रहेछन ।
प्रयोग गरिएका मास्कहरु मुख्यतः दुइ किसिमको देखियो । झण्डै २४ प्रतिशतले सामान्य कपडाको मास्क र झण्डै ७ प्रतिशतले सर्जिकल मास्क लगाएको देखियो । तलको चित्रमा बायाँतिरका मास्क लुगाका हुन् र दायाँ तिरका सर्जिकल मास्क हुन् ।
कति ठूला प्वाल रहेछन त मास्कमा
काठमाडौं धेरै मान्छेले प्रयोग गर्ने लुगाको माक्समा हाम्रो अनुसन्धान केन्द्रित थियो । यी लुगाका टुक्रामा माइक्रोस्कोपले हेर्दा ४६१ माइक्रोनसम्म ठूला प्वाल भेटिए । याद रहोस, यी मास्कले साना धुलोका कण १० माइक्रोनभन्दा साना कण छेक्ने आशाले हामीले लगाउने गर्छौँ ।
तर, मास्कले धुलोका साना कण छेक्ने नछेक्ने कुरा प्वालको साइज मात्रै नभएर तिनको घनत्व र त्यहाँ उपलब्ध फाइबर नेटवर्क अर्थात झिल्लीमा पनि निर्भर गर्दछ । अध्ययनले प्वालको घनत्व ४।५ बर्ग मिलिमिटर पाइएको अध्ययनमा संलग्न डा।गिरीले जानकारी दिए ।
यी मास्कले के धुलोका कण रोक्छन त
यो थाहा पाउनका लागि अध्ययनकर्ताको टोलीले पेट्रि डिस्कलाइ मास्क लगाइ दिएको थियो । खुल्ला ठाउँमा केही समय राखियो । मास्कको अर्कोतर्फ कति धुलोका कण छिरे भनेर नापियो । आँफै खसेका धुलोका कण ९एःज्ञण्० ६३५ देखि ८४५ सम्म मास्कको अर्कोतर्फ नगएको देखियो ।
लुगाको मास्कले भन्दा सर्जिकल मास्कले अझै धेरै ९९४५ सम्म धुलोका कण रोकेको देखियो । याद गर्नुस् कि अध्ययनकर्ताले नापेको दस माइक्रोनभन्दा साना कण हुन् ।
धेरै साना कण अध्ययनकर्ताले प्रयोग गरेको माइक्रोस्कोपले नाप्न नसक्ने हुनाले त्यस्ता कणहरु गणना गरिएको छैन् । अनि स्वास लिँदा ताने जस्तो कणहरु तानिएको पनि होइन । त्यसैले के भन्न सकिन्छ भने खास मान्छेले मास्क लगाउँदा यस्ता मास्कले अत्यन्तै कम कणहरु मात्रै रोक्न सक्ने हुन सक्छ ।
मास्क धोएर वा तानेर लगाउँदा के हुन्छ त
कपडाको मास्क लगाउने धेरैले फोहर भएपछि धोएर फेरि लगाउने चलन पनि छ । तर त्यसरी धुँदा मास्कका प्वालहरु झन् ठूला भएको देखिएको छ । त्यसरी एक पटक धोएको मास्कमा २०५ सम्म धुलो छेक्ने क्षमता कम भएको पाइयो ।
त्यस्तै तानतुन पारेर वा कानमा फिट गराउन तन्काएर लगाउँदा पनि मास्कको प्वालहरु ठूलो भएको पाइएको छ र प्वाल ठूलो हुने भनेको धुलोको कण छेक्ने क्षमता कम हुनु हो ।
मास्क लगाउने कि नलगाउने त
कपडाका मास्कहरु धेरै प्रभावकारी छैनन् । तर पनि लगाउदा केही हदसम्म हानिकारक धुलोका कणबाट हामी जोगिन सक्छौँ । कपडाको मास्क भए धेरै नतन्काइ लगाउने र नधोई लगाउने। सकेसम्म सर्जिकल मास्क लगाउनु पर्छ । बजारमा पाईने गुणस्तरयुक्त मास्क लगाउँदा भने राम्रो हुने डा। न्यौपानेको भनाई छ ।
मास्कले छेक्दैन धुलोधुवाँ
राजधानीमा वायु प्रदूषणबाट बच्न प्रयोग हुने कपडाका मास्कले धुलो र धुवाँको कण छेक्नै नसक्ने तथ्य सार्वजनिक भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा प्रयोग भइसकेका मास्कको प्रयोगशाला परीक्षणसहित गरिएको अध्ययनमा ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म प्रदूषणका कण छिर्ने गरेको पत्ता लागेको हो ।
अमेरिकाको मासाचुसेट्स विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रिचार्ड पेल्टियर र नेपाली वैज्ञानिक कविन्द्र शाक्यले गरेको अध्ययनअनुसार त्यस्ता मास्कले धुलो र धुवाँका कण पटक्कै छेक्दैनन् । मास्कभित्रै प्रदूषणका कण जम्मा भएर बस्छन् ।
साइन्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट इपिडिमियोलोजीमा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार कपडाको मास्क प्रयोग गर्दा ८० देखि ९० (सेन्थेटिक पार्टिकल्स) प्रतिशत नाकमुखभित्र छिरेको थियो । ‘डिजेल इन्जिन भएको ट्रकको छेउमा बस्दा त झन् अवस्था भयावह हुन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मास्कले छेक्छ भनेर ढुक्क हुनु रोग निम्त्याउनु हो ।’
अस्पतालहरूले प्रयोग गर्ने सर्जिकल मास्कले भने तुलनात्मक रूपमा धुलोका कण बचाएको पाइयो । तर यी पनि परपर्दो र पूर्ण विश्वासिला भने छैनन् । उपत्यकाका अति प्रदूषित क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका मास्क लगाउने सर्वसाधारणबीच अनुसन्धान केन्द्रित गरिएको थियो ।
धोएर पुनः प्रयोग हुने मास्क सबैभन्दा खतरायुक्त भएको निष्कर्ष छ । काठमाडौं उपत्यकामा पीएम १० र पीएम २.५ को अवस्था असाध्यै डरलाग्दो अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धानकर्ताहरूले सस्ता मास्कले उल्टै रोग निम्त्याउन सहयोग गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
पीएम २.५ सीधै नाक र मुखबाट फोक्सोमा पुगेर गाडिन्छ । अध्ययनअनुसार लस एन्जलसमा पीएम १० (पार्टिकुलेट्स पर क्युबिक मिटर धुलोका कण) एक सय छ भने काठमाडौंमा आठदेखि नौ सयसम्म हुन्छ । यो विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा सात गुणा बढी हो । यस्तो अवस्थामा नेपालमा कपडाका मास्क प्रयोग गर्नु र नगर्नु उस्तै भएको निष्कर्ष छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा भने मास्कको प्रयोगबारे अहिलेसम्म कुनै अनुसन्धानसमेत भएको थिएन । नेपालमा परीक्षण गरिएका र प्रदूषणबाट बचाउने मास्कबारे सर्वसाधारणसँग जानकारी नै नभएको पनि अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । उद्योग, कलकारखानामा काम गर्दा प्रयोग गरिने एन ९५ नामको मास्क प्रयोग गरे प्रदूषणबाट बच्न सकिन्छ ।
तर यस्तो मास्कका बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी नै नभएको प्राध्यापक रिचर्डले बताए । यस्ता मास्क विकासोन्मुख तथा विकासशील देशमा भने सजिलै उपलब्ध हुँदैनन् । यस्ता मास्क महँगोसमेत हुने उनको भनाइ छ ।
सर्वसाधारणले भने मास्क लगाउँदा धुलोधुवाँका कणबाट बच्न सकिने विशेष रासायनिक पदार्थ राखिएकोसमेत विश्वास गरेका हुन्छन् । तर त्यस्ता मास्कमा प्रदूषण छेक्न कुनै पनि रासायनिक पदार्थ तथा अन्य वस्तु प्रयोग गरिएको हुँदैन ।
यसअघि विभिन्न सन्दर्भमा वातावरणविद् तथा चिकित्सकहरूले भने मास्कले धुलो र धुवाँको कण (पीएम १० र पीएम २.५) रोक्न उपयोगी हुने बताउँदै मास्क लगाएर हिँड्न सुझाव दिने गरेका छन् । धोएर पुनः प्रयोग गर्न र लामो समय प्रयोग गर्न सकिने भएकाले कपडाको मास्कको प्रयोग बढी हुने गरेको हो ।
अध्ययनकर्ताले धेरै मास्क प्रयोग हुने चीन र भारतमा पनि यो अध्ययन गरेका थिए । रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘त्यहाँ पनि त्यस्तै अवस्था छ । मान्छेहरू धुलो र धुवाँबाट बचिन्छ भनेर कपडाको मास्क प्रयोग गर्छन् तर त्यसले काम गर्दैन ।’
उपत्यकामा वायु प्रदूषणका मुख्य स्रोत गाडी तथा उद्योग, कलकारखानाबाट निस्किने धुवाँ र इँटाभट्टा हुन् । विभिन्न अध्ययनले ६० प्रतिशत प्रदूषण गाडीकै कारण हुने तथ्य सार्वजनिक गरेका छन् । पछिल्ला पाँच वर्षमा प्रदूषणको मात्रा ४० प्रतिशतले बढेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले काठमाडौं वायु प्रदूषणका दृष्टिकोणले एसियामा दोस्रो सहर भएको उल्लेख गरेका छन् । उपत्यकामा पछिल्लो समय प्रदूषणको अवस्था नाप्न प्रयोग गरिएका यन्त्रसमेत छैनन् । पीएम २.५ सीधै नाक र मुखबाट फोक्सोमा पुगेर गाडिन्छ ।
विज्ञहरूका अनुसार यसले फोक्सोमा असर गर्छ र क्यान्सरको खतरा बढाउँछ । वायु प्रदूषणका कारण सबैभन्दा धेरै श्वासप्रश्वासका रोगी बढेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार अति कम विकासशील देशका १३ लाख मानिसले बर्सेनि प्रदूषणकै कारण ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
वातावरण मन्त्रालयको एउटा अध्ययनअनुसार नेपालमा बर्सेनि १ हजार ६ सयभन्दा बढीको मृत्यु भइरहेको छ भने १५ लाख मानिसले श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या झेलिरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (युनेप) को एउटा तथ्यांकअनुसार दुई दशकपछि वायु प्रदूषणको यही अवस्था रहे नेपालमा बर्सेनि २५ हजारको मृत्यु हुनेछ ।
Don't Miss it के तपाइलाइ हाई आइरहन्छ ? यस्ता छन् हाई कम गराउने उपाय, जान्नुहाेस्
Up Next जिब्रो सफा राख्न अपनाउनुस् यी सजिको तरिका
गर्मीयाममा यसरी गर्नुहाेस् छालाकाे हेरचाह
गर्मी मौसम छालासम्बन्धी रोगका लागि पनि संवदेनशील मौसम मानिन्छ। यो मौसममा सूर्यको ताप चर्को हुने, वातवरणमा सुक्ष्म जीवाणु र किराफट्यांग्रासमेत…
दसैंमा सचेत भएर मासु उपभोग गर्न विज्ञले सुझाव दिएका छन् । विज्ञका अनुसार यो समयमा मासुको गुणस्तर नहेरी जथाभावी सेवन…